अब दसैँमा घर फर्कने सैनिकले नि:शुल्क गाडी र हेलिकोप्टर चढ्न पाउने ! – Jagaran Nepal
अब दसैँमा घर फर्कने सैनिकले नि:शुल्क गाडी र हेलिकोप्टर चढ्न पाउने !
दसैँमा शहरबाट कसरी घर फर्कने भन्ने सर्वसाधारणमा चिन्ता हुन्छ । तर नेपाल सेनाले भने आफ्ना सैनिक र तिनमा आश्रित परिवारजनलाई दसैँमा घर जानका लागि नि:शुल्क गाडी र हेलिकोप्टरबाट सेवा गर्ने घोषणा गरेको छ ।
यो कस्तो प्रेम सम्बन्ध हो ? बुढो शिक्षक र किशोरी छात्राको अनौठो प्रेम, यसरी भाइरल भयो !
गुल्मीमा यात्रुहरुले हेर्दाहेर्दै खोलाले जिप बगायो
सार्वजनिक विदा दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय